विचित्र संसार | Sambad Media
Home » विचित्र संसार You are browsing entries filed in “विचित्र संसार”
शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि वास्तुशास्त्रमा अनेकौं उपाय सुझाइएका छन् । यीमध्ये यहाँ दिइएका आठ उपाय अपनाए मात्र पनि तपाईंको भाग्य चम्किन्छ । पर्खालको मोटाइ : घरको दक्षिण र पश्चिमतर्फका पर्खाल उत्तर र पूर्वतर्फका पर्खालभन्दा अग्ला र मोटा हुनुपर्छ । सडकभन्दा अग्लो हुनुपर्छ जमिन : घर बनाउनलाई जमिन किन्दा वरपरको सडकभन्दा अग्लो भएको सुनिश्चित […]
Posted in विचित्र संसार | Read More »
अदालतमा न्यायाधीशको चर्तिकला १० वर्षअघि एउटा अमेरिकी अदातलमा न्यायाधीशको टेबल पछाडि कृत्रिम महिला अंगसहित न्यायाधीशलाई आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारिएको समाचारले सनसनी मच्चाएको थियो । सन् २००६ मा ओक्लोहामा सहरको अदालतमा न्यायाधीश डोनाल्ड थम्पसन एउटा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला उक्त कृत्रिम खेलौना प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा मानिसहरूको नजरमा परेका थिए । उक्त कुरा सार्वजानिक हुनासाथ उनलाई जागिरबाट निकाली […]
बाफ रे ! यस्तो रहेछ हस्तमैथुनको इतिहास
– पाषाण एवं मध्यकालीन युगमा ढुंगा तथा चट्टानमा बनाइएको चित्रले के पुष्टि गर्छन् भने हस्तमैथुन आज मात्र होइन, सदियौं अघिदेखि चल्दै आएको क्रिया हो । माल्टामा बनेको ४० लाख वर्ष इसापूर्व पुरानो मन्दिरको एउटा पेन्टिङमा महिलाले हस्तमैथुन गरिरहेको देखाइएको छ । – ऐतिहासिक चित्र वा मूर्तिमा देखिने हस्तमैथुनमध्ये धेरैजसोमा पुरुष आरामदायक मुद्रामा हस्तमैथुन गरिरहेका हुन्छन् […]
अखिर महिलाहरु पुरुषको तुलनामा बढी सफासुग्घर किन रहन्छन् ? अब यो कुनै रहस्य रहेन । इन्टरनेट मार्केट रिसर्च पोर्टल YouGov का अनुसार ९३ प्रतिशत महिलाहरु एकपटक अन्डरवियर लगाएपछि धुने गर्दछन् । तर, १८ प्रतिशत पुरुष नधोइकन एउटा अन्डरवियर कयौ दिनसम्म लगाउने गर्दछन् । पोर्टलले गरेको सर्वेमा कयौ यस्ता पुरुषले यो कुरा स्वीकार गरे कि उनीहरु […]
मानिसहरु सामान्यतः मदिरा सेवन गरेपछि अंग्रेजी बोल्ने गरेको तपाईले पनि ख्याल गर्नुभएको होला । विशेषगरी गैरअंग्रेजी भाषीहरु मदिरा सेवन गरेपछि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग बढी गर्ने गर्दछन् । तर तपाई कुनै अन्य भाषामा बोल्ने कोशिस गर्नुहुन्छ भने तब कयौपटक तपाईका साथ यस्तो भएको होला । सही शब्द तपाईले मुस्किलले पाउनुहुनेछ र त्यसको सही उच्चरण गर्न पनि […]
डभको एउटा विज्ञापनमाथि नश्लभेदको आरोप लागेको छ। डभले हालै एउटा फेसबुक विज्ञापन अभियान सुरु गरेको थियो । जसमा लोशनको उपयोग गरेर एउटी काली महिलालाई गोरी देखाइएको छ। डभ लोशन उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो यो ‘नश्लभेदी’ विज्ञापनप्रति माफी पनि मागेको छ । ‘डभ’ लोशन यो फेसबुक विज्ञापन अभियानमा तीन तस्वीर देखाएको छ । पहिलो तस्वीरमा एक […]
मोडलको खुट्टामा रौं देखेर बलात्कारको धम्की आएपछि…
‘सुन्दरता हेर्नेको आँखामा हुन्छ’, ‘मनको सुन्दरतानै वास्तविक सुन्दरता हो …आदिआदि । मानिसहरु अक्सर यस्ता कुरा सुनाउने गर्दछन् । तर, के हामी साँच्चै आफ्नो वा अन्यको शरीर र अनुहारलाई लिएर सहज छौ ? शायद छैनो । स्वीडेनकी मोडल अरविदा बिस्ट्रममाथि पनि यस्तै भएको छ, यसबाट त्यस्तै देखिन्छ । उनले एउटा विज्ञापनका लागि आफ्नो खुट्टामा भैक्सिंग नगरीकनै […]
मानिसहरु यस्तो स्थानमा सेक्स गर्न रुचाउँदारहेछन्
सर्वसाधारणहरु मात्र होइन,विज्ञहरुले पनि समयसँगै मानिसको यौन जीवन बोरिङ हुने गर्दछ । यस्ता अवस्थामा आफ्नो यौन जीवनलाई कामोत्तेजक र एडभेन्चरस बनाइराख्न आवश्यक छ। त्यसका लागि नयाँ नयाँ प्रयोग गरिरहनु उत्तम हुनेछ । फोरप्लेको नयाँ तरिका होस कि नयाँ पोजिशन अपनाउनु होस वा कुनै नयाँ स्थान । एउटा सर्भेका अनुसार यो सताब्दको फन्डा यसबारेमा क्लियर छ […]
एउटा ट्वीटले मिस टर्कीको ताज यसरी खोसियो
टर्कीकी ब्युटी क्वीनलाई एउटा विवादास्पद ट्वीट गर्नु निकै भारी सावित भएको छ। सन् २०१७ की मिस टर्कीलाई एउटा पूरानो ट्वीट संचार माध्यममा आएपछि उनको ताज खोसिएको हो । १८ वर्षीया मिस टर्की आइतिर एसेनले टर्कीमा गत वर्ष भएको सशस्त्र विद्रोहसँग सम्बन्धित एउटा पोस्ट शेयर गरेकी थिइन् । उनले उक्त पोस्टमा ‘सहिदहरुको’ रगतको चुलना पिरियडसको रगतसँग […]
फेसबुकको माध्यमबाट हामी एकअर्कामा धेरै सजिलैसँग जोडिन्छौ । दिनहुँ भए गरेका घटनाहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा अपडेट गरिरहन्छौ । तर, के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि यही फेसबुक पोस्टले हामीलाई समस्यामा पनि पार्न सक्छ । समस्या पनि कुनै सानोतिनो होइन, सिधैं जेल यात्रा गर्नुपर्ने खाले । फ्रेन्ड रिक्वेस्टले न्यायाधीशलाई जेल ६ वर्ष पहिलो बेलायतका एक जना […]